Ego nwere ike ịbụ na nkọwapụta nke OnePlus 8 na 8 Pro | Gam akporosis
Ahịa na nkọwa nke OnePlus 8 na 8 Pro: a ga-enyocha ozi nke ga-abụ ọkwa gọọmentị
Anyị dị nso ịmara ihe niile gbasara ezinụlọ OnePlus ọhụrụ, nke A ga - eji ngwaọrụ atọ mejupụta ya ma gosipụta ya ma bido n’abalị iri na anọ nke ọnwa Eprel. Abụọ n'ime ụdị ndị anyị ga-anata n'ụbọchị ahụ bụ OnePlus 8 y 8 ikp.
N'ime ọnwa ole na ole gara aga, anyị na-enweta ozi dị mkpa banyere ọdịdị na àgwà nka na ụzụ nke njedebe abụọ ahụ. Otú ọ dị, ihe ọhụrụ ahụ nke si n'aka ọnụ ụzọ ámá tipster a ma ama winfuture.de na-ekwu data dị iche iche dị ka onye ọrụ gọọmentị, nke gụnyere ọnụahịa nke abụọ ndị a, yana iche iche nke RAM na ebe nchekwa dị n'ime nke a ga-etinye ha n'usoro.
1 Kedu ihe ị ga-atụ anya n'aka OnePlus 8 na 8 Pro?
1.2 OnePlus 7 usoro mpempe akwụkwọ
Kedu ihe ị ga-atụ anya n'aka OnePlus 8 na 8 Pro?
Dị ka ihe e kwuru na akụkọ a na-adịbeghị anya, ma smartphones ga-abata na Qualcomm Snapdragon 865, a elu-arụmọrụ chipset na-ahụkarị ịhụ ụgbọala nke afọ a flagships. Ihuenyo ndị a bụ AMOLED nke 6.55 na 6.78 sentimita asatọ na mkpebi FullHD + na QuadHD +, n'otu n'otu. Nke mbụ na-enye ume ọhụrụ nke ruru 90 Hz, ebe mbipute dị elu na-ahọrọ 120 Hz.
N'aka nke ya, OnePlus 8 ga-enye 20: 9 akụkụ ruru, ebe Pro ga-anya isi akụkụ 19.8: 9 ma ọ ga-adaba na ngosipụta mgbanwe, MEMC na HDR10 +, yana ha abụọ na-egosipụtakwa akara mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo. Na mgbakwunye na nke a, ihe na ogwe nke ndị a mobiles òkè bụ na ha na-perforated na Ha nwere ihe mmetụta sensọ 471 megapixel Sony IMX16 na EIS. O yiri ka ha ga-enwe modulu foto n'ihu nke ga-enwe ọrụ niile nha anya, dị ka akụkọ ahụ na-egosi na ekwentị abụọ ahụ ga-akwado ihe ndekọ vidiyo 1080p na 30 fps site na mkpuchi ihu.
Ndabere nke OnePlus 8 nwere a 586MP Sony IMX48 isi lens meteta sistemụ kamera nwere OIS na EIS, 16 MP ultra wide-angle shooter na oghere 2 MP nnukwu. OnePlus 8 Pro, n'aka nke ọzọ, nwere sistemụ igwefoto quad na azụ nwere 689-megapixel Sony IMX48 isi ihe mmetụta na OIS na EIS, a 586 Celsius Sony IMX120 ultra-wide lens, a 8 MP telephoto lens na 3x mbugharị ngwa anya na mbugharị dijitalụ 30x na OIS, yana nzacha agba 5 MP na PDAF. Ejikọtara igwefoto quad na ọkụ ọkụ abụọ na laser AF.
Modelsdị abụọ a na-akwado ndekọ vidiyo vidiyo 4K na 30/60 fps. Prodị pro ahụ na-akwado 48fps na 240fps nwayọ ngagharị vidiyo.
winfuture.de na-egosikwa na ụdị ọkọlọtọ nwere LPDDR4 RAM na Pro na-abịa na ụdị LPDDR5. N'aka nke ya, nke mbụ nwere batrị ikike 4,300 mAh nwere 30 W Warp Charge 30T ngwa ngwa na-ebu teknụzụ, ebe OnePlus 8 Pro nwere nnukwu batrị 4,510 mAh na otu nkwado nkwado ngwa ngwa, na mgbakwunye Ọ na-enyekwa 30W wireless wireless na 3W reverse Ọzọkwa, a na-akọkwa nke ikpeazụ a na-akwado mbugharị ọdịyo 3D na ihe ọkụ ọkụ.
Sistemụ arụmọrụ anyị ga-ahụ na ọkọlọtọ ndị a ga-abụ Android 10 dabere na ụdị OxygenOS 10 kachasị ọhụrụ. Anyị ga-enwetakwa ndị na-ekwu okwu stereo na Dolby Atmos ike, nkwado maka netwọkụ 5G, nkwado abụọ SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS na USB-C.
Nke a bụ otú OnePlus 8 Pro si ele akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nke ọhụrụ ya
Iji mechaa, OnePlus 8 na-atụle 160.2 x 72.9 x 8mm ma tụọ gram 180. OP8 Pro, ka ọ dị ugbu a, na mgbakwunye na ịbịa Ntụle IP68, nwere akụkụ nke 165.3 x 74.4 x 8.5 mm na ibu nke gram 199. Enweghị oge ọzọ, mgbe ị kwusịrị ọnụ ahịa gịAnyị ga-ahapụ akwụkwọ data nke usoro OnePlus 7 na njedebe iji tụnyere ihe ọhụrụ ọ bụla anyị ga-enweta na ezinụlọ ọzọ nke ụlọ ọrụ China.
Ihe dị iche iche nke OnePlus 8 na 8 GB nke Ram + 128 GB nke nchekwa na 12 GB nke RAM + 256 GB ga-abata na Europe na ihe dị ka ọnụahịa nke 729 na 835 euro. Onyx Black, Glacial Green na Interstellar Glow bụ ụdị agba ha atọ.
Ihe nchekwa 8 GB Ram + 128 GB na 12 GBR AM + 256 GB mbipụta nke OnePlus 8 Pro ga-efu 930 na 1.020 euro, n'otu n'otu. Ọ ga-abata na Onyx Black, Glacial Green na Ultramine Blue agba. A na-atụ anya na ha ga-ere ahịa bido Eprel 30.
OnePlus 7 usoro mpempe akwụkwọ
IKIRU AMOLED 6.41 »FullHD + 2.340 x 1.080 pikselụ (402 dpi) / 19.5: 9 / Corning ozodimgba iko 6 AMOLED 6.67 »QuadHD + 3.120 x 1.440 pikselụ (516 dpi) / 19.5: 9 / Corning ozodimgba iko
Ram 6 ma ọ bụ 8 GB 6 / 8 / 12 GB
Ndị isi Azụ: Sony IMX586 nke 48 MP (f / 1.7) nke 0.8 µm na OIS + 5 MP (f / 2.4) nke 1.12 µm. Ugboro abụọ ikanam flash / Ihu: Sony IMX471 16 MP (f / 2.0) 1 .m Azụ: Sony IMX586 48 MP (f / 1.7) 7 µm 0.8P lens na OIS + 8MP (f / 2.4) na mbugharị anya 3x + 16 MP (f / 2.2) 117º obosara. Ugboro abụọ ikanam flash / Ihu: Sony IMX471 16 MP (f / 2.0) 1 .m
UMUAKA 3.700 mAh na 20-watt Dash Charge ngwa ngwa (5 volts / 4 amps) 4.000 mAh na 30-watt Warp Charge ngwa ngwa (5 volts / 6 amps)
OS Achịcha 9 Akara n'okpuru OxygenOS Achịcha 9 Akara n'okpuru OxygenOS
Njikọ Wi-Fi 802 ac / Bluetooth 5.0 / NFC / GPS + GLONASS + Galileo / Nkwado Dual-SIM / 4G LTE Wi-Fi 802 ac / Bluetooth 5.0 / NFC / GPS + GLONASS + Galileo / Nkwado Dual-SIM / 4G LTE
Atụmatụ ndị ọzọ Na nyocha ihuenyo mkpịsị aka / Nchọpụta ihu / USB-C (USB 3.0 Gen 1) / ndị na-ekwu okwu stereo / nkagbu Noise / Nkwado maka Dolby Atmos Na nyocha ihuenyo mkpịsị aka / Nchọpụta ihu / USB-C (USB 3.0 Gen 1) / ndị na-ekwu okwu stereo / nkagbu Noise / Nkwado maka Dolby Atmos / SBAS / Alert Slider
Mbibi na ibu ibu 157.7 x 74.8 x 8.2 mm na 182 gram 162.6 x 75.9 x 8.8 mm na 206 g
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ahịa na nkọwa nke OnePlus 8 na 8 Pro: a ga-enyocha ozi nke ga-abụ ọkwa gọọmentị
eziokwu bụ na ha dị oke ọnụ echere m na Redmi K30 Pro ma ọ bụ Realme X50 Pro dị mma maka ndị na-adịghị amasị nke ọzọ
Google machibidoro ndị ọrụ ya ịwụnye ngwa mbugharị vidiyo vidiyo na kọmputa ọrụ